Tetikasa Indostrialy Petrochemical
Tsindry avo 1500LBS 24 "valizy vavahady fanindriana ny valiny, fenoina ary vonona halefa. Ny valizy vavahady fanamafisana tena dia manangana rafitra avo lenta, izay mampihena ny kofehin'ny vatan'ny valizy eo ambanin'ny tsindry avo sy ny refy lehibe misy savaivony, manatsara ny relia. ..
Varahina varahina C95800 ho an'ny tetik'asa an-dranomasina any Maorisy tamin'ny datin'ny JAN. 2020
Swing Check valves, valizy mampihena tsindry ary valizy saftey. Ny fitaovana alimo varahina dia manana toetra mekanika avo lenta, fanoherana ny harafesina tsara eo amin'ny atmosfera, rano madio sy rano anaty rano, tanjaka havizanana havizanana, fahaleovan-tena tsara ary fanoherana tsara ...
Valve lolo lolo sombin-tsofina roa misy seza PTFE ho an'ny fampiasana rano fisotro misy daty NOV. 25, 2019
GGG50 Ductile iron Material miaraka amina boaty sy amin'ny actuator pneumatika. Fampiharana Akzo Nobel Coating fampiharana valves lolo Double Eccentric Butterfly Valve Double Butterfly, ampiasaina indrindra amin'ny fantsakan-drano amin'ny zavamaniry rano, zavamaniry herinaratra, zavamaniry vy, fandorana, simika ...
Tetikasa an-dranomasina any Egypta tamin'ny 18 desambra 2019
SS316L tsindry ambony Trunnion mitaingina valizy misy valizy miendrika static 3-Way valizy misy 10inches 300LBS misy flanged farany valves Ball Valves ireto manaraka ireto dia fampiharana mahazatra an'ny valves Ball: -Air, gazy, ary ranon-javatra -Drains and vents in li. ..
Valizy cryogenika amin'ny fampiasana mari-pana ambany
LCC fitaovana sy SS304 kapila fanamarinana valves tamin'ny Jolay. 14, 2019 valizy cryogenika Ny famaritana ny valves amin'ny mari-pana ambany amin'ny indostrian'ny petrochemical dia mifototra amin'ny mari-pana endrika ny mpanelanelana mampita. Amin'ny ankapobeny, ny valves dia mihatra amin'ny maripana antonony eto ambany ...
Tetikasa ho an'ny toby famokarana herinaratra
Valizy fanaraha-maso Disc an'ny mpanjifa misy lanjany mifanitsy amin'ny 15 Aogositra 2019 Nandritra ny fampiasana ity valva ity dia mihodina mankany amin'ny zana-tsipika aseho amin'ny vatana ny mpanelanelana. Rehefa mikoriana amin'ny lalana voatondro ny mpanelanelana dia sokafy amin'ny alàlan'ny herin'ny mpanelanelana ny kapila valva; ...
MHPS MKCCPP Project-Globe Control Valves SS DUPLEX 2205 Daty Mey. 20, 2019
Fitsipika miasa amin'ny valizy fanaraha-maso pnemika Ny valizy fanaraha-maso pneumatic dia karazana fifandanjana tsindry ho an'ny tahan'ny mari-pana, ny tahan'ny tsindry ary ny tahan'ny mikoriana. Izy io dia manana rafitra seza tokana sy karazana tanany. Miaraka amin'ny actuator membrane pneumatic multi-spring, ny actuator dia ...
DUPLEX SS TRIPLE OFFSET BUTTERFLY VALVE Daty Mey. 28, 2019
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-05-29
Fampiharana mahazatra an'ny valves an'ny Butterfly Valizy iray lolo dia azo ampiasaina amin'ny serivisy tsiranoka maro samihafa ary mahomby amin'ny fampiharana slurry izy ireo. Ireto manaraka ireto dia fampiharana mahazatra an'ny valizy lolo: -Rano mangatsiaka, rivotra, etona, fiarovana afo sns -Slurr ...